Vidio Universal 8192 Level S620 Digital Graphic Tablet ho an'ny sary & Lalao OSU - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Universal 8192 Level S620 Digital Graphic Tablet ho an'ny sary & Game OSU
$52.99 Regular vidiny $87.99
sambo avy Shina Aostralia Frantsa Federasiona Rosiana Etazonia Brezila Espaina Ukraine Polonina
Shina Aostralia Frantsa Federasiona Rosiana Etazonia Brezila Espaina Ukraine Polonina
Universal 8192 Level S620 Digital Graphic Tablet ho an'ny sary & Lalao OSU - Sina tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Fiatrehana ny tsindry: 8192
Karazana: Takelaka sary
Ratsy fanavotana: 5080lpi
Famintinana ny sary: ​​1920 x 1080
Screen Size (diagonal): 4 "
Karazana: Takelaka Digital
Ny halavan'ny tablette: 211mm
Teknolojia pen: Fampandehanana elektronika passive
Fanalahidy Express: 4 Key Key
Toerana fiasana: 165.1x 101.6 mm /6.5*4 inch
Haavo fahita: 10mm
Tahan'ny tatitra: 266PPS
Fifanarahana OS: Android 6.0, Win 7 ary macOS 10.12 na mihoatra
Teknolojia Pen: Resonance elektromagnetika pasif
Kitendry fanaovan-gazety: 4 Key Key
Toerana fiasana: 165.1x 101.6 mm (6.5 * 4 santimetatra)
Fahatsapana ny tsindry penina: haavo 8192
Famahana ny penina: 5080 LPI
Rariny: ± 0.3mm
Haavony mahatsapa: 10mm
Pète passive: stylus tsy misy bateria io izay mandray ny haitao passif mandroso indrindra, tsy misy bateria ary tsy ilaina famahanana. Ity penina miaro ny tontolo iainana ity dia mamela ny sary tsy tapaka sy milalao tsy tapaka, misoroka ny hery ambany manelingelina ny asanao. Ary tonga miaraka amin'ny fanalahidy express 2 azo tsapain-tanana, toggle iray tsindry iray monja dia ahafahanao manova ny fiasa eo anelanelan'ny borosy sy ny famafana tsy tapaka. (8 Pen Nibs) - Extra 8 nibs dia ampidirina ho soloina.
Toerana mavitrika: 6.5 * 4 santimetatra, takelaka kely ho an'ny sary hosodoko nomerika, sora-tanana, lalao milalao, ary famolavolana sary mihetsika, sns. . (RATE momba ny tatitra) - 266 PPS; (RESOLUTION) - 5080LPI; (Havoana famakiana pen) - 10mm. (MICRO USB OUTPUT) - Manaova fampitana data haingana kokoa.
Mifanaraka amin'ny OS / SOFTWARE: Miasa amin'ny Android 6.0, Win 7/8/10, ary Mac OS 10.12 na ambony. Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny rindrambaiko manao sary toa ny Adobe Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Lightroom, Sketchbook Pro, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita, sns. Ampifanaraho amin'ny Application sonia Adobe Acrobat Reader DC, afa-po amin'ny filana sonia orinasa nomerika.
Manaova sary, manasonia ary manome hevitra mivantana momba ireo antontan-taratasy isan-karazany: Ankoatry ny fanaovana sary, fanaovana sonia ary fanamarihana mivantana ao amin'ny rakitra PDF / WORD / EXCEL / POWERPOINT miaraka amin'ny S620, ireo mpampiasa dia afaka maneho an-kalalahana ny heviny amin'ny S620 ihany koa rehefa mampiasa ny Zoom amin'ny Internet fihaonambe na lavitra izy ireo. fanabeazana, izay hanampy amin'ny fampivoarana ny fizotran'asa sy hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
Famoronana mety: 4 rubber vita amin'ny anti-slip no noforonina mba hiantohana ny fitoniana amin'ny takelaka. Misy port USB micro azo ampifandraisina amin'ny biraonao na PC. Miaraka amin'ny fanalahidy 4 mazava eo an-tampon'ny tabilao, tsy mila ahodina ny takelaka penina 180 ° amin'ny fampiasana maody ankavia. (WARRANTY 1 taona) - Manarona fiantohana 1 taona miorina amin'ny fahasimbana tsy vita amin'ny olombelona sy ny fahasimbana vokatry ny lozam-pifamoivoizana izahay.
Penina Pasifika miaraka amin'ny tsindry penina 8192 haavo: penina tsy misy bateria - Ny ArtPaint Pen AP32 dia mandray ny teknolojia pasifika malala-tontolo iainana, tsy mila batterie na famahana intsony, dia miasa ho tena penina. Mora sy ara-toekarena- Tapaho ny teti-bola amin'ny bateria. Ary ialao ny olana amin'ny tsy fahampian'ny tariby famandrihana USB. Ny penina tsy misy bateria dia misy tombo-kase sy rafitra tsara kokoa noho ny penina bateria. 8192 Level pen pressure- ahafahanao mamorona tsipika malama sy milamina kokoa. Manatsara be indrindra ny traikefan'ny mpampiasa anao amin'ny famoronana nomerika. 8 Pen Nibs --- Misy penina penina fanampiny 8 misy ao anaty boaty, natokana hampiasainao amin'ny ho avy.
4 + 2 Fanalahidy azo zahana Programmable: 4 Express Key amin'ny takelaka + bokotra penina 2 amin'ny penina --- Azo namboarina arakaraka ny safidinao manokana. Ampitomboy ny fahombiazan'ny asa. Ary koa, ireto bokotra ireto dia toa manararaotra kokoa rehefa milalao lalao Rhythm toy ny osu! Sns
Dual Monitor: Rehefa miasa miaraka amin'ny mpanara-maso 2 ianao dia afaka misafidy ny valin'ny penina ao amin'ny monitor1 na monitor2 fotsiny, na izy roa ireo. Rafitra Windows: Tsindrio ny "windows + p" amin'ny keyboard ---> avy eo safidio ny "Duplicate" na "Extend". Raha misafidy Extend Mode ianao: vohay azafady ny mpamily GAOMON --- Faritra asa ---- Azafady mba jereo ny "Asehoy ny 1 / Asehoy ny 2 / ny fampisehoana rehetra" ary safidio ny iray amin'ireny ho faritra iasana. Rafitra Mac: Aleo ny rafitra --- Asehoy --- Fandaharana --- Zahao na esory ny boaty "Mirror Display". Raha misafidy "uncheck Mirror Display box" ianao (Mode Extended) --- Azafady mba sokafy ny mpamily GAOMON --- Faritra asa ---- Azafady mba jereo ny "Asehoy ny 1 / Asehoy ny 2 / ny fampisehoana rehetra" ary safidio ny iray amin'izy ireo ho faritra iasana .
Adaptatera 2xOTG (Fampiasana amin'ny fifandraisana amin'ny telefaona Android ihany)
Nisy fonosana iray volana 1,5. Ny zava-drehetra dia miasa amin'ny Win10 sy Android. Ny mpamily hahita mora, avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra alaina tsy misy olana. Fa ny telefaona tsy misy fanampiny. Tsy nila nametraka izany. Tena tiako ilay izy.
Faly ny zanako vavy, miasa tsara ny zava-drehetra. Tonga aho tamin'ny herinandro. Fonosina tsara sy azo antoka. Miasa takelaka tsara ny zava-drehetra, mandeha tsara ny zava-drehetra. Faly ny zanako vavy
Misaotra anao tamin'ny takelaka. Iray volana katroka no lasa ny entana. Балдеж.
Ny fanarahan-dia niraikitra tamin'ny "fahazoan-dàlana vita soa aman-tsara", na dia efa vita hatry ny ela aza ny fandefasana, ka noraisiko taty aoriana Fa mendrika izany, tsara ilay takelaka! Na dia ity no takelaka voalohany ividianako sy takelaka an-tsary, ary amin'ny ankapobeny, dia tsy afaka mampitaha aho. Fa tiako izany, mbola mizatra ihany
Lavorary daholo. Tonga amin'ny toe-javatra tonga lafatra, miasa tanteraka. Tia koa.